UJohn Wayne: Kwenzekani ngeRevolver yakhe, holster rig, iLife Magazine yango-1972?
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-USA Izindaba Ezintsha » UJohn Wayne: Kwenzekani ngeRevolver yakhe, holster rig, iLife Magazine yango-1972?
Ezokuzijabulisa • Films • Investments • Izindaba • Abantu • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
UJohn Wayne Colt Revolver
Isibhamu sikaJohn Wayne futhi sisetshenziswe yinkanyezi yaseNtshonalanga kumamuvi amaningana sisanda kuthengiswa ngama- $ 517,500 eRock Island Auction Company (RIAC). I-Colt-gun eyisithupha yaqale yathola isilinganiso esiphansi kakhulu yinkampani yendali, kepha ngemuva kokuthola inzuzo ngqo, inzalo yakhula ngokushesha phakathi kwabaqoqi.
Isibhamu seColt Single Action Army singabonakala sisetshenziswa nguWayne kumafilimu anjenge Grit weqiniso, Iqhude Cogburn, Futhi AbakwaCowboys, Phakathi kwabanye.
Okufakwe nevolovolo kwakuyi-holster rig kaWayne, imibhalo eminingi egunyazayo, kanye nekhophi yango-1972 ye- Ukuphila Magazine
ILife Magazine yayinoWayne esembozweni egqoke kokubili i-rig nesibhamu.
"Imakethe eqoqwayo ibilokhu ibhekene nokukhula okukhulu ezinhlotsheni eziningi," kuphawula uMongameli we-RIAC uKevin Hogan. “Uma uhlanganisa ezimbili zalezo zinhlobo, izikhumbuzo zaseHollywood neziqoqo zabaqoqi, kungamema umncintiswano othile oshubile. Sijabule kakhulu ngomthumeli wethu futhi sijabule kakhulu ukuthi abathengi bethu basethemba ukuthi sizogunyaza lezi zinto ezinhle. ”
Ukukhula emakethe yezikhali zabaqoqi kuyaqhubeka nokulingisa izinombolo zokuthengisa eziphakeme ezibonakala emkhakheni wezokuthengisa. Indali okwanikelwa ngayo ivolovolo likaWayne's Colt yangezwa ekhalendeni le-RIAC ukuhlangabezana nesidingo esikhulayo. Umcimbi wezinsuku ezi-3 ubunezibhamu ezingaphezu kuka-7,000 zabaqoqi kanye nezinto ezenziwe ngempi, izesekeli, umsebenzi wobuciko, futhi uthole ngaphezu kwezigidi ezingama- $ 8.